किन बन्द छ ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे एभरेष्ट होटेल ? - hamro Desh
किन बन्द छ ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे एभरेष्ट होटेल ?
काठमाडौं । काठमाडौं शहरमा ठुल्ठूला होटल बनिरहेका र बन्ने घोषणा भइरहेका बेला ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारो होटल एभरेष्ट २५ महिनादेखि बन्द छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भई बन्द भएको भनिएको होटल भवनको मर्मतको काम सुरु भएको छैन । ११ जना सुरक्षा गार्डको भरमा एभरेष्ट होटल अलपत्र छ ।
भूकम्पपछि हरियो स्टिकर लगाइदिएर पुनः सञ्चालनमा आइसकेको होटलमा केही दिनपछि रातो स्टिकर लगाइएको थियो । भूकम्पपछि उद्धारका लागि आएका चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा आदिको टोली नै होटलका अतिथि बनेका थिए ।
भारतीय सञ्चार माध्यमको फौज नै होटल एभरेष्टमा बसेको थियो । तर, दोस्रोपटकको अनुगमनमा रातो स्टिकर लाग्यो, होटल बन्द भयो । रातो स्टिकर टाँसिनु अघिल्लो दिनसम्म होटलका एक सय १६ रुम , तीनवटा रेस्टुराँ, एउटा बार र तीनवटा साना ठूला हल भरिभराउ हुन्थे ।
बीमा दावी बिबादित भएपछि होटलको मर्मत र सञ्चालनको काम रोकिएको हो । स्रोतका अनुसार होटलले भवन पूर्ण क्षति भएको भन्दै ठूलो रकम क्षतिपूर्तिवापत दाबी गर्यो । बीमाले सामान्य क्षति मात्रै पुगेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेपछि होटलको मर्मत सुरु नै भएन । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।